Sawirro:- Dufcadii 10aad oo ka Qalinjabisay Jaamacada Jigjiga – AwKutub News
Sawirro:- Dufcadii 10aad oo ka Qalinjabisay Jaamacada Jigjiga
By awkutubnews June 30, 2018 July 7, 2018
Leave a Comment on Sawirro:- Dufcadii 10aad oo ka Qalinjabisay Jaamacada Jigjiga
Waxaa jaamacada jigjiga kaqabsoomay Xaflad qalin jabin ah oo si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kuqalinjabiyeen dufcadii 10aad ee ardayda jaamacada jigjiga, kuwaasoo tiradoodu dhantahay 4037 arday oo baratay culuumta kaladuwan ee ay jaamacdu bixiso, islamarkaana heerka aqoontoodu tahay degree’ga 1aad iyo degree’ga 2aad (master).
Iyadoo xafladana ay kasooqaybgaleen madaxwayne kuxigeenka Ddsi ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah, mas’uuliyiinta jaamacda oo uu ugu horeyo madaxwaynaha jaamacada jigjiga, odayaal dhaqameedka deegaanka, ardaydii qalinjabinaysay, waalidiinta, ehelada iyo asxaabta ardayda qalinjabinaysa.
Hadaba, munaasabadan qalijabinta ah oo ugu horay lagu bilaabay heesta calanka qaranka itoobiya ayaa waxaa ugu horayn khudbad muhiim ah kasoojeediyay Madaxwayne Kuxigeenka Ddsi Ahna Wasiirka Xafiiska Beeraha Iyo Horumarinta Khayraadka Dabiiciga Ah Marwo Sucaad Axmed Faarax oo ugu horayn u hanbalyaysay ardayda qalinjabinaysa. Waxayna madaxwayane kuxigeenku si faahfaahsan uga hadashay heerka uu deegaanku ka gaadhay waxbarashada islamarkaana barbardhig kusamaysay 10 sano kahor deegaanku siduu u dib dhacsanaa dhanka waxabarshada iyo guud ahaanba horumarka dhinacyadiisa kaladuwan.
Waxayna marwadu xustay in jaamacada jigjiga ay kamid tahay jaamacadaha ugu sareeya jaamacadaha dalkeenan itoobiya.
madaxwayne kuxigeenka oo hadlkeeda sii wadata ayaa dhamaan ardayda qalinjabisay kuboorisay inay noqdaan kuwo cilmiga ay barteen uga faaiideeya bulshadooda islamarkaan ugu adeega si daacad ah.
Sidookale, Madaxwaynaha Jaamacada Jigjiga Dr. Cabdicasiis Ibraahim ayaa hanbalyayn kadib kahadlay ardayad sanadkan qalin jabisay oo ah dufcadii 10aad iyo waliba guud ahaan sooyaalkii taariikheed ee jaamacada jigjiga.
Madaxwayanaha Jaamacada ayaa ugu horayn kawarbixiyay ardayda sanadkan ka qalinjabisay jaamacada, isagoo sheegay in ardayda sida joogtada ah (Regular students) wax uga baranaysay jaamacada jijiga ay isugu jira degree’ga 1aad iyo degree’ga 2aad (mastar) kuwaasoo tiradoodu dhantahay 1346 arday. Meesha ardayda dhigata waxbarashada weekend iyo waxbarashada fogaanta ay tiradoodu dhantahay 2691. Wuxuuna carabka kudhuftay inay guud ahaan jaamacada jigjiga ay ka qalinjabisay sanadkan 2010 T.I arday tiradoodu dhan tahay 4037 arday. kuwaasoo baratay culuumaha kaladuwan ee ay jaamacadu bixiso.
Wuxuuna hadalkiisii ku soo gunaanaday in ilaa iyo intii jaamacada la aasaasay ay ka qalinjabiyeen arday tiradoodu dhan tahay 27, 738, arday islamarkaana ay tiradani tahay mid aad usaraysa marka loo eego da’da ay jirto jaamacadu.
Dhankakale, gabagabadii xaflada ayaa waxaa ardaydii ugu dhibcaha badnayd halkaas lagu gudoonsiiyay abaal marino kaladuwan.
Previous Entry Somaliland: Imtixaanaadka Shahaadiga ah ee Dugsiyada Sare iyo Hoose/dhexe Oo Bilowday
Next Entry Akhriso:-Nuxurka Khudbadii Madaxweyne Farmaajo Ee Munaasabadii 1-Da Luulyo